Wasiirka caafimaadka ee Puntland oo booqday Dhahar, gargaar dawo ahna guddoonsiiyay maamulka cisbitaalka guud ee Dhahar. – Radio Daljir
Wasiirka caafimaadka ee Puntland oo booqday Dhahar, gargaar dawo ahna guddoonsiiyay maamulka cisbitaalka guud ee Dhahar.
Dhahar, Mar 14 -Wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr cali Cabdulaahi Warsame ayaa ka hadlay booqasho hal maalin ah oo uu maalintii shalay ku tagay magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Haylaan.
Wasiirka oo uu waramay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay socdaalka uu ku tagay magaalada Dhahar inay qayb ka ahayd kormeero madaxda wasaaradda caafimaadka ay ku sameeynayaan gobolada kale duwan ee Puntland,si loogu kuur gallo adeega caafimaad ee deegaanada Puntland.
Waxaa uu xusay magaalada Dhahar inuu gaarsiiyay deeq dawo ah oo u badan dawooyinka lagama maarmaanka u ah xarumaha caafimaadka,isagoona tilmaamay deeqdaasi inay dabooli doonto baahiyaha dhanka caafimaadka ee ka jira isbitaalka.
Dr Warsame ayaa dhinaca kale cadeeyay wasaaraddu inay dayactiri doonto isbitaalka guud ee magaalada Dhahar oo uu qayb ka mid ah burbur xoogani uu ka jiro,wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa uga mahadceliyay dadwayanaha magaalada Dhahar oo isbitaalka howlihiisa dardar geliyay.
Mar wax laga weydiiyay xiriirka wasaaradiisa ay la leedahay wasaaradda caafimaadka ee dowladda faderaalka ayaa waxaa uu sheegay wasaaradda caafimaadka ee dowladda faderaalka inay deeqaha caafimaad oo ay ka hesho caalamka inay xiligaan ku koobtay badankooda magaalada Muqdisho, islamarkaana aysan jirin wax deeq ah oo ay ka siisay mashaariicda caafimaadka ee dowladda Turkiga ay ka waddo magaalada Muqdisho.